2015 – Waa Sanad Muhiim u ah Somaliya
HMA Neil Wigan OpEd
Bilawga Sanadka waa waqti ah in dibloo eego wixii horumar ah oolagaaray. Horumar badan ayaalagaaray sanadkii aanusoodhaafney ee 2014 iyo Somliya oo haysa wadadii xasiloonida. Wadadan ma’ahayn mid sahlan xaga dib’udhiska dal soomaray marxalada kaladudwan balse tani ayaa ubaahneeyd hor’uwaditaanka dadaalada eey samameeynaayaan Somaalida oo wadajir ah. Balse horumar aad uweeyn ayaa lagaaray. Araga wadooyinka Muqisho oo mashquulah, horumarka ganacsiga kasocdo tekedaha iyo horumarka dhanka amaanka ee laga gaaray gobolada ayaa tusineeysa sida Somaaliya oo xasiloon eeynoqonkarto.
Eegida dal kasoo kabanaya dhibaatooyinkii dagaalada ayaa ah farxad aad uweeyn. UK marwalba weeyidingarab taagantahay wexeeyna idinfidineeysaa taageerada aad ubaahantihiin in horey uu dalka u socodo.
Anagoo wadashaqeeyneena sanadkan 2015, waxaa weli jira carqalada oo ubaahan in lagatilaabsado si loo xaqiijiyo horumarada daciifka ah in la adkeeyo si looga dhigo kuwa aan diblooga noqonkarin. Waaaa weli jira caruur badan oo la’ildaran nafaqa daro. Kuwa isticmaala qalalaasaha oo weli awooda in ey qalqalgeliyaan horumarkii lagaaray. Tixgelinta xuquuqda aadanaha oo weli ubaahan in lagagaaro horumar, dhanka hayadaha dowlada.
Waxaan xaqiiqdii aaminsanahay in dhamaan carqaladahan lagatilaabsankaro. Waqtigeeyga oo aan hogaaminayo taageerida Boqortooyada Ingiriiska (UK) eey ufidineeyso dalka Soomaliya, waxaa marwalba aan arkayey xirfadaha iyo go’aanada ayqaateen dadka Soomaalida. Iyadoo ugu dhawaan sedex meel laba oo Soomaalida eeyihiin dadkayar 25 sano jir, dad u furfuran ganacsiga iyo hibo eey uleeyihiin wadahadalka, casriga cusub ee dunida xariiriya ayaa u ah Somaalida fursad eey horey ugudhaqaaqaan. Tani ayaa sidookale waxaa xaqiijiyey Soomalida qurbajoogta ah. Dagaal la’aan wadankani wuu barwaaqoobayaa.
Xulitaanka waziirada cusub ee dowlada ayaa imaaneeysa xili muhiim ah anagoo waajaheeyno carqaladaha jira. Waxaanu sii wadeeynaa lashaqeeynta iyo taagerida dowlada Soomaliya iyo dadaalada loogujiro in horumar loogagaaro amaanka, xasiloonida iyo waxqabadka asaasiga eey ubaahan yihiin bulshada soomaaliyeed iyo si eey uhelaan fursada shaqooyin, bilaabitaanka ganacsiya cusub si eey utaageeraan qooysaskooda.
Waxaan kufaraxsanahay in dowlada UK aykacayaareeyso door ah taageerida dadka iyo dowladaba taasoo ku’aadan mustaqbalka Somaaliya. Xiriirka labadeena dal ee UK iyo Soomaliya ayaa ah mid adag oona qotodheer iyo Soomali badan oo firfircoon oo qurba jog ah oo kunool Uk gaar ahaan ayaa sameeyey horumar badan eeykasameeyeen meela badan oo kala du duwan. Waxeey aheeyd fursad farxadbadan kadib markii Boqorada Uk eey awaalmarisey Maxamed Faarax oo kasoojeeda dalka Somaliya mar uu kuguuleeystey laba dahab ee tartankii Olimbikada ee kadhacaayey dalka UK. Sidookale Soomalida waxeeykuhorumartey ganacsiga, saxaafadaha iyo siyaasadaba. Sanadihii lasoodhaafey ayaa la’arkaayey Soomali badan oo xirfadeeysan oo dalka dib ugusoo laabanaya si eey dibugudhisaan dalkooda tani oo aad u’muujineeysa aaminsanaanta ah in Somalia eyheyso wadadii xasillonida.
Dalka UK wuxuu siiwadidoonaa in uu sii wada uuna hogaamiyo taageerida caalamiga oo lagutaageerayo Somalia si loo xaqiijoyo horumarada lagaaray in aan dib loosoo celin Karin qaas ahaan sanidkani oo ah mid aad iyo aad muhiim ah.
Sida Raisul Wazaareheena David Cameron uu hory uyiri “ Hada ayaa lajoogaa xiligii lataageerilahaa rajada dadka Somalida. Taasi ayaa ah tii eey mudo dheer sugaayeen eyna rajeenaayeen, waan inaanan meelcidla ah ugatagin dadka Somaalida.”
Wadada laguhelo amaan iyo xasilooni ma’aha mid fudud, balse Somaaliya waxeey saarantahay wadada toosan oo laguhelilahaa taasi, waana waqtigii lagubedeli lahaa rajadaas in eeynoqoto run